အပန်းဖြေခြင်း… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » အပန်းဖြေခြင်း…
Posted by lu ta lone on Apr 2, 2010 in Arts & Humanities, Critic, Literature/Books |2comments
တနေ့တွင် မုဆိုးတဦးသည် အီစွတ် (Aesop) ထံ အလည်လာသောအခါ အင်မတန်ကျော်ကြားသောလူက သူဧ။် အိမ်မွေးစာကလေး (Pet Sparrow) ဖြင့် ဆော့ကစားနေသည်ကို တွေ့သဖြင့် အလွန်အံ့သြသွားသည်..
သို့နှင့် အီစွတ်အား “ကစားခြင်းဖြင့် ဘာကြောင့် အချိန်ဖြုန်းတီးနေသလဲ..? စာကလေးလို အသုံးမ၀င်လှတဲ့အရာကို ဘာကြောင့် အချိန်ပေးရသလဲ..? “ ဟုမေးလိုက်သည်.. အီစွတ်သည် သူ့အား အံ့သြစွာကြည့်ပြီး “ ခင်ဗျားရဲ့ လေးပေါ်က ကြိုးက ဘာကြောင့်တင်းမနေတာလဲ..? “ ဟု ပြန်မေးလိုက်သည်…
“ တချိန်လုံး တင်ထားလို့ မရဘူးဗျ “ မုဆိုးက ရှင်းပြသည်.. “ သို့မဟုတ်က ၄င်းဟာ တင်းအားလျော့သွားပြီး မြားပစ်ရာမှာ အသုံးမ၀င် ဖြစ်သွားမှာပေါ့ “ ဟုပြောလိုက်သည်…
“ သူငယ်ချင်း ခင်ဗျားရဲ့လေးပေါ်က တင်းအားကို အမြဲလျှော့ထားရသလို၊ ခင်ဗျားရဲ့ အတွင်းက တင်းအားကိုလည်း ဖြေလျှော့ပြီး အပန်းဖြေရတယ်.. ကျွန်ုပ် အပန်းမဖြေ၊ ဆော့မကစားဘူးဆိုရင် တကယ့်ကို တာဝန်ကြီး ထမ်းဆောင်ရမယ့်အခါကျရင် ကျွန်ုပ်မှာ ခွန်အားရှိမှာ မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ “ ဟု အီစွတ်က ပြန်ပြောလိုက်သည်….
ကျွန်တော်ကတော့ သဘောကျတယ်ဗျာ.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ တခါတလေစ်ိတ်ကို ထွက်ပေါက်ပေးသင့်တယ်လေ..(ကိုယ်လုပ်ချင်တာ လျှောက်လုပ်ပြီးတော့ပေါ့..ဘောင်ကတော့ မကျော်စေနဲ့ပေါ့..) နည်းနည်း ကြီးကျယ်ပြီးပြောရရင် Outlet လိုအပ်တယ်ပေါ့ဗျာ..
ကျွန်တော်က အီစွပ်ကို ထောက်ခံသူပါ
လူဆိုတာ တသမတ်ထဲ ဘယ်သူမှ မရပ်တည်နိုင်ဘူး
all right. လူဆိုတာ တသမတ်ထဲ ဘယ်သူမှ မရပ်တည်နိုင်ဘူး အပြောင်းအလဲ လိုတယ် အများကိုမထိခိုက်ရင်ပြီးတာပဲ